နာမည်ကျော် မျက်လှည့်ပြကွက် (၅) ခုရဲ့ နောက်ကွယ်က လျို့ဝှက်ချက်များ - Shwe Khit Online TV
HomeAmazingနာမည်ကျော် မျက်လှည့်ပြကွက် (၅) ခုရဲ့ နောက်ကွယ်က လျို့ဝှက်ချက်များ
April 27, 2020 Bo Bo Amazing 0
နာမည်ကျော် မျက်လှည့်ပညာရှင်တွေရဲ့ ပြကွက်တွေဆိုတာမျိုးက တစ်ခါတစ်ရံကြရင် မယုံကြည်နိုင်စရာကောင်းလောက်အောင်ပဲ တကယ့်ကို ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းလှပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ဒီပြကွက်တွေရဲ့ နောက်ကွယ်ကလျို့ဝှက်ချက်တွေကို သိခဲ့ရင်တော့ သင့်အနေနဲ့ အံ့သြတော့မှာ မဟုတ်တော့ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ shwekhitonlinetv.com
ဒါကြောင့် ဒီလိုအံ့အားသင့်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ မျက်လှည့်၊ မှော် ပြကွက်တွေရဲ့ နောက်ကွယ်က ရိုးရှင်းလှတဲ့ လှည့်စားချက်လေးတွေကို တစ်ဆင့်ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။ shwekhitonlinetv.com
၁။ မှော်အစွမ်းနဲ့ လေပေါ်မှာ မြောနေတဲ့ ပြကွက်
ဒါကတော့ မျက်လှည့်ပြကွက်ဆိုတာထက် မှော်စွမ်းအင်၊ ကျင့်စဉ်တွေနဲ့ ဆက်နွယ်နေမယ်လို့ ရုတ်တရက်ကြည့် ထင်ချင်စရာပါ။ ဒါပေမယ့် လျှို့ဝှက်ချက်ကို သိသွားမယ်ဆိုရင်တော့ ဒါဟာ သိပ်ပြီးထူးဆန်းတော့မယ်လို့ မထင်ပါဘူး။ ဒီပြကွက်မှာ ဘာမှော်ပညာ ဘာကျင့်စဉ်တစ်ခုမှ မပါဝင်အောင်ရိုးရှင်းလှပါတယ်။ shwekhitonlinetv.com
ဒီပြကွက်ဟာ အထူးပြုလုပ်ထားတဲ့ စတီးဖရိန်ပေါ်မှာ အေးအေးဆေးဆေးတက်ပြီး ထိုင်ကာသရုပ်ဆောင်နေခြင်းသာဖြစ်ပါ တယ်။ ပုံကိုကြည့်လိုက်ရင်တော့ ရှင်းပြနေစရာမလိုလောက်အောင်ကို လွယ်ကူတယ်ဆိုတာ သင်သဘောပေါက်မှာပါ။ shwekhitonlinetv.com
၂။ (၁) ဒေါ်လာကနေ ဒေါ်လာ (၁၀၀) ဖြစ်အောင် လုပ်တဲ့ ပြကွက်
(၁) ဒေါ်လာတန် ငွေစက္ကူကနေ ဒေါ်လာ (၁၀၀) တန်ငွေစက္ကူဖြစ်အောင် လုပ်ပြတဲ့ ပြကွက်ကလည်း အတော်လေးကို စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းပြီး ရေပန်းစားလှပါတယ်။ ဘယ်လိုလုပ်သလဲဆိုတာကော မသိချင်ကြဘူးလား ? လွယ်ပါတယ်။ shwekhitonlinetv.com
မျက်လှည့်ပြတဲ့ သူက (၁) ဒေါ်လာတန်ငွေစက္ကူကို ခေါက်လိုက်ပြီး သူ့ရဲ့လက်ထဲမှာ လျင်မြန်စွာဖွက်လိုက်ပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ သူ့မှာအသင့်ပါလာတဲ့ ဒေါ်လာ (၁၀၀) တန်ငွေစက္ကူနဲ့ လဲလှယ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ကြိမ်ဖန်များစွာလေ့ကျင့်ထားရင် ဟာကွက်မရှိဘဲ ကြည့်ရှုသူကို ကျွမ်းကျင်စွာ လှည့်စားနိုင်မည့်ပြကွက်ဖြစ်ပါတယ်။ shwekhitonlinetv.com
၃။ ရေပေါ်မှာ လမ်းလျှောက်ပြတဲ့ ပြကွက်
ရေပေါ်မှာ ကိုယ်ဖော့ပြီး လမ်းလျောက်နိုင်၊ ပြေးလွှားနိုင်တဲ့ ပညာရှင်တွေတော့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ တကယ်ရှိပါတယ်။ ဥပမာ ကိုယ်ဖော့သိုင်းထူးချွန်တဲ့ ရှောင်လင်ကိုယ်တော်တွေလိုပေါ့။ ဒါပေမယ့် တစ်ချိ့မျက်လှည့်ပညာရှင်တွေ ရေပေါ်လမ်းလျောက်ပြတာကတော့ ဒီလိုမဟုတ်ဘဲ ကြိုတင်စီမံထားတဲ့ အရာတွေကို အသုံးပြုပြီး မှင်ကောင်းကောင်းနဲ့ သရုပ်ဆောင်ပြကာ ပိပိရိရိ လှည့်စားတာမျိုးသာဖြစ်ပါတယ်။ shwekhitonlinetv.com
ကြည်လင်မှု မရှိတဲ့မြစ်ရေ ဒါမှမဟုတ် ရေကူးကန်လို ရေပြင်ပေါ်မှာ လမ်းလျောက်ပြတဲ့ ပြကွက်မှာတော့ အောက်မှာအသင့်ခံထားတဲ့ မှန် ဒါမှမဟုတ် ပလတ်စတစ် လျောက်လမ်းပေါ်မှာ လမ်းလျောက်ပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုအရာတွေကိုတော့ ပြကွက်မပြသခင် ကြိုတင်စီမံထားတာဖြစ်ပါတယ်။ shwekhitonlinetv.com
၄။ လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ ဖဲချပ်ကို ဖြဲပြတဲ့ ပြကွက်
မျက်လှည့်ပညာရှင်တစ်ဦးက ပရိသတ်ထဲကတစ်စုံတစ်ယောက်ကို ခေါ်ယူပြီး သူကိုင်ထားတဲ့ဖဲထုပ်ထဲကနေ အဆိုပါပရိသတ်စိတ်ကြိုက် ဖဲတစ်ချပ်ကို သူမမြင်အောင် ယူစေပြီး ဖဲချပ်ရဲ့ အပွင့်နဲ့သင်္ကေတကို မှတ်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံ ပိုမိုသေချာအောင်လို့ ဖဲချပ်ပေါ်မှာ အဆိုပါပရိသတ်ကို လက်မှတ်ပါထိုးတာလိုမျိုး သင်္ကေတတစ်ခုခုပါလုပ်ခိုင်းစေပါသေးတယ်။ shwekhitonlinetv.com
ပြီးရင်တော့ အဆိုပါ ပရိသတ်မှတ်သားထားတဲ့ ဖဲချပ်ကို ခေါက်ချိုးလိုက်ပြီဒ အစိတ်စိတ်အမွှာမွှာဖြစ်အောင် စုတ်ဖြဲပစ်လိုက်မယ် ပြီးတဲ့အခါ အဲ့ဒီပရိသတ်မှတ်သားထားတဲ့ လက်မှတ်ပါရှိတဲ့ ဖဲချပ်ကိုပဲတစ်ဖန် အကောင်းပကတိအတိုင်း ပြန်လည်ပြသပြီး အံ့အားသင့်စေမယ်။ ဒါကို သူ့အနေနဲ့ ဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲဆိုတဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်ကတော့ အတော်ရိုးရှင်းလှပါတယ်။ shwekhitonlinetv.com
သူက ပရိသတ်မှတ်သားထားတဲ့ ဖဲချပ်ကိုခေါက်ချိုးပြီးတာနဲ့ သူ့ရဲ့အကျီလက်ထဲမှာ အသင့်ခေါက်ပြီး ဝှက်ထားတဲ့ ဖဲချပ်နဲ့ အလျင်အမြန်လဲကာ အစားထိုးလိုက်တဲ့ ဖဲချပ်ကိုသာ စုတ်ဖြဲပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်မှသာ ပရိသတ်ရဲ့ လက်မှတ်ပါတဲ့ ဖဲချပ်ကို ဝှက်ထားရာကနေ ပြန်လည်ပြသလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ shwekhitonlinetv.com
၅။ ဓားကို မျိုချတဲ့ ပြကွက်
ဓားကိုမျိုချပြတဲ့ ပြကွက်ကလည်း ကြည့်ရှုတဲ့သူတွေအဖို့ အသည်းယားစရာကောင်းလှသလို ပြသသူအတွက်လည်း အလွန်အန္တရာယ်များလှပါတယ်။ ဒီပြကွက်ကိုပြသဖို့အတွက် အချို့ဖျော်ဖြေသူတွေဟာ နှစ်ပေါင်းများစွာ အချိန်ပေးပြီး သင်ယူလေ့ကျင့်ရပါတယ်။ shwekhitonlinetv.com
ဒါပေမယ့်လည်း တစ်ချို့သူတွေကတော့ ဓားကိုအလွယ်တကူပဲ မျိုချပြပြီး အားလုံးကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့ပါတယ်။ ဘာကြောင့်သူတို့ ဒီလိုအလွယ်တကူ ဓားကိုမျိုချ ပြနိုင်တာလဲ ? ဒီပြကွက်က လွယ်ကူတယ်လို့ဆိုနိုင်ပေမယ့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြင်ဆင်မှုများစွာ ပြုလုပ်ထားဖို့တော့ လိုအပ်ပါတယ်။ shwekhitonlinetv.com
ကျွမ်းကျင်စွာပြသနိုင်သူတွေရဲ့ လျို့ဝှက်ချက်ကတော့ ဓားမျိုချမယ့် အစာအိမ်လမ်းကြောင်းကို (၉၀) ဒီဂရီ တစ်ဖြောင့်တည်းဖြစ်အောင် ဦးခေါင်းနဲ့ လည်ပင်းကို အထက်ကိုမော့ပြီးဆန့်တန်းထားတာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ shwekhitonlinetv.com
အခုဖော်ပြခဲ့တာကတော့ နာမည်ကျော်လူကြိုက်များတဲ့ အံ့အားသင့်စရာမျက်လှည့်ပြကွက်တွေရဲ့ နောက်ကွယ်က လျှို့ဝှက်ချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို လျို့ဝှက်ချက်တွေကို သိရှိရလို့ ဒီပြကွက်တွေက လွယ်ကူတယ်ဆိုပြီး မိမိအိမ်မှာ မစမ်းသပ်ကြည့်ကြဖို့တော့ အထူးသတိပေးပါရစေနော် … shwekhitonlinetv.com
(၃) ခါလောက် ကြည့်ပြီးမှ နားလည်နိုင်မယ့် ထူးထူးဆန်းဆန်း ဓာတ်ပုံများ